एप्पल त्रुटि 53 XNUMX बारे कुरा गर्दछ: यो हाम्रो जानकारीको सुरक्षा गर्नु हो आईफोन समाचार
एप्पल त्रुटि 53 XNUMX बारे कुरा गर्दछ: यो हाम्रो जानकारीको रक्षा गर्न हो
यस हप्ता एक समस्या हो कि प्रयोगकर्ताहरूले पीडित हुन सक्दछन जब अनौपचारिक स्थापनामा टच आईडीको साथ हाम्रो उपकरणको मर्मत गर्दा ज wild्गल आगोको रूपमा चालू हुन थालेको छ। यदि मेकानिक धेरै सतर्क छैन भने, यसले सानो ब्रेकडाउन निम्त्याउँछ जुन त्रुटि 53। तर त्रुटिको मतलब के हो 53? म के गर्न सक्दछु यदि यो देखा पर्दछ जब मेरो उपकरण अपडेट गर्न वा पुनर्स्थापना गर्ने प्रयास गर्दा? यदि तपाईंले पहिल्यै देखिसक्नुभयो भने, सत्य यो हो कि यो एकदम राम्रो देखिँदैन, तर एप्पल आलोचनाको साथ यस संस्करणमा बाहिर आइसकेको छ।
आफ्नो बयानमा, एप्पल भन्छन् कि यो त्रुटि नराम्रो मनसायले गरिएको छैन (म के भन्न जाँदैछु?), तर यो सुरक्षा कारणका लागि हो। यदि हामी मद्दत गर्न हाम्रो आईफोन लिन्छौं र तिनीहरूले कुनै तरिकामा हेरफेर गरिएको फिंगरप्रिन्ट सेन्सर राख्छन् भने, दुर्भावपुर्ण प्रयोगकर्ताले हाम्रो सबै जानकारीहरूको पहुँच गर्न सक्दछ। अर्को शब्दहरु र धेरै संक्षिप्त मा, त्रुटि 53 को कारणले अवस्थित छ हाम्रो जानकारी को सुरक्षा.
“हामी हाम्रा ग्राहकहरूको सुरक्षालाई धेरै गम्भीरताका साथ लिन्छौं र त्रुटि 53। हाम्रो ग्राहकहरूको सुरक्षाको लागि डिजाइन गरिएको चेकको नतिजा हो। आईओएसले जाँच गर्दछ कि तपाईंको आईफोन वा आईप्याडको टच आईडी सेन्सरले तपाईंको उपकरणको अन्य कम्पोनेन्टहरूसँग मेल खान्छ। यदि आईओएस एक बेमेल भेटियो भने, चेक असफल हुन्छ र एप्पल पे को प्रयोग सहित टच आईडी अक्षम छ। यो सुरक्षा उपाय तपाईंको उपकरणको रक्षा गर्न र टच ID सेन्सरको जालसाजी प्रयोगलाई रोक्नको लागि आवश्यक छ। यदि ग्राहकले Error 53 त्रुटिको सामना गर्‍यो भने हामी उनीहरूलाई एप्पल समर्थनलाई सम्पर्क गर्न प्रोत्साहित गर्दछौं। "
1 के त्रुटि third 53 तेस्रो-पार्टी मर्मतका लागि विशेष छ?
2 के म 53 XNUMX लाई बायपास गर्न बाइपास गर्न सक्छु?
3 यो कसको गल्ती हो कि यो भइरहेको छ?
4 त्यसोभए निश्चित हुन: मैले के गर्नुपर्छ?
के त्रुटि third 53 तेस्रो-पार्टी मर्मतका लागि विशेष छ?
होइन। हामी पनि यो त्रुटि देख्न सक्दछौं यदि तपाईं यो हाम्रो लागि सुधार गर्नुभयो भने। एक आधिकारिक वा अधिकृत स्थापना de मान्जना। तर त्यहाँ आधारभूत भिन्नता छ: यदि हामी आधिकारिक मर्मत पछि 53 XNUMX त्रुटि देख्यौं भने, एप्पलले नयाँ मर्मत लिन्छ। ध्यानमा राख्दै कि टच आईडी अन्य हार्डवेयरसँग मेल खानुपर्दछ, तिनीहरूले कि त चेक ठीक गर्न सक्दछन् वा हामीलाई नविकरण गरिएको वा मर्मत गरिएको उपकरण डेलिभर गर्न सक्दछन्।
के म 53 XNUMX लाई बायपास गर्न बाइपास गर्न सक्छु?
अहँ, टिम कुकले आतंककारीहरूको जासुसी गर्न ढोका पछाडि बनाउन आग्रह गर्दा के भनेको तपाईंलाई याद छ? यदि तिनीहरूले "राम्रो मान्छे," को लागी पछाडिको ढोका सिर्जना गरे भने यो केवल समयको कुरा हो "नराम्रो मान्छे" फेला पार्छ र यसको शोषण गर्दछ। यदि एप्पलले यस बगको वरिपरि तरिका सिर्जना गरेको हो भने, कुनै पनि मालिसियस प्रयोगकर्ताले कपटपूर्ण टच आईडी सर्क गर्न सक्दछ, बगलाई बाइपास गर्न, र हाम्रो डाटा जोखिममा हुनेछ।
यो कसको गल्ती हो कि यो भइरहेको छ?
यो प्रश्नको सजिलो उत्तर छैन। छोटो उत्तर यो एप्पलको गल्ती हो। लामो उत्तर त्यो दोषी छ यो प्रयोगकर्ताहरूसँग सम्बन्धित छ २०१ 2013 मा टच आईडी प्रस्तुत गर्दा के वर्णन गरिएको थियो भन्ने कुरा ध्यानमा नराख्न: फिंगरप्रिन्ट सेन्सर जुन उनीहरूले आईफोन s एस सँग प्रस्तुत गरेका थिए, र यसैले अन्य सबै, केवल एक्स प्रोसेसरसँगै मिलेर काम गर्ने छ जुन यो माउन्ट गरिएको थियो। उनीहरूले यो पहिले नै उनीहरूको समयमा भनेका थिए र सुरक्षा वर्णनका लागि हो भनेर पनि वर्णन गरेका थिए। हामी प्रयोगकर्ताहरू हौं जसले यसलाई बिर्सिरहेका छौं हाम्रो आईफोनलाई अनौपचारिक स्थापनामा लगेर।
यसले मलाई एक भाइलाई फ्रान्सेली ब्रान्डबाट अनौपचारिक कार्यशालामा कार लिनको लागि के भएको थियो भन्ने कुराको सम्झना गराउँछ। उनीहरूले धेरै महँगो इलेक्ट्रोनिक ब्रेकडाउन गरे र बीमाले भुक्तान गरेन, र यो भुक्तान गरेन किनकि मर्मत पूर्ण रूपमा सही थिएन, किनभने उहाँ आधिकारिक कार्यशालामा जानुभएको थिएन। अर्कोतर्फ, अनौपचारिक मेकानिकको काम ठीक थियो, पोस्ट-मर्मत सम्बन्धी समस्याहरूबाट बच्न केवल आधिकारिक कम्प्युटर आवश्यक थियो।
त्यसोभए निश्चित हुन: मैले के गर्नुपर्छ?
यो प्रश्नसँग पनि उत्तर छैन जुन सबैले समान रूपमा मन पराउँछन्। सबैभन्दा सुरक्षित चीज सधैं हुन्छ आधिकारिक वा अधिकृत स्थापनामा जानुहोस्। यसको मतलब मेरो मतलब यो होइन कि उनीहरूसँग राम्रा पेसेवरहरू छन्, तर तिनीहरूसँग खराब मर्मतको प्रतिक्रिया दिन सक्ने शक्ति छ। यदि आधिकारिक कार्यशालाले हामीलाई अर्को विफलता निम्त्याउँछ भने, यसले हामीलाई नयाँ मर्मतको लागि भुक्तान गर्दछ। यदि हामी अनौपचारिक स्थापनामा जान्छौं, यदि यो पहिले राम्रोसँग जान्छ भने सबै कुरा ठीक छ। यदि त्यसो हो भने यो गलत हुन्छ र यो एक मेकानिकल समस्या होईन, हामीसँग पहिले नै समस्या छ।
सबैभन्दा गम्भीर समस्या ती देशहरूमा हो जहाँ कुनै आधिकारिक प्रतिष्ठानहरू छैनन्। यी केसहरूमा, म भन्नेछु कि सस्तो महँगो हुन सक्छ। कुनै पनि समस्याको स्थितिमा, विशेष गरी यदि टच आईडी संलग्न छ भने, यो प्रश्नका बारे एप्पल वेबसाइटबाट एप्पल समर्थनलाई सम्पर्क गर्नु उत्तम हुन्छ। उनीहरूले हामीलाई भन्दछन् हामी के गर्न सक्दछौं, यद्यपि हामी निश्चित रूपमा उत्तर मनपर्दैन। कुनै पनि केसमा, मलाई लाग्छ कि रोकथाम उपचार भन्दा उत्तम हो, र यति धेरै यी मूल्यहरूको साथ उपकरणमा।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » एप्पल त्रुटि 53 XNUMX बारे कुरा गर्दछ: यो हाम्रो जानकारीको रक्षा गर्न हो
पेड्रो पाब्लो भन्यो
नमस्कार, हो यो तपाईंलाई भएको छ। समाधान FLEX केबल परिवर्तन गर्नु हो, यो बिग्रिएको देखिन्छ र यसैले यसले मोबाइललाई ईंट छोड्छ। टचआईडीले पुन: कार्य गर्दछ र तिनीहरू समस्याहरू बिना नै अपडेट गर्न सक्षम हुनेछन्, जबसम्म उनीहरूले यो प्रतिस्थापन गरेका छैनन्।
पेड्रोपाब्लोलाई जवाफ दिनुहोस्
र error error त्रुटि के हुन्छ सुरक्षा संग, यदि बटन परिवर्तन गर्दा सुरक्षा एक समान रहन्छ।
यदि प्रत्येक बटन यसको प्लेटसँग सम्बन्धित छ भने, तपाईं यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ, जुन तपाईं पहुँच गर्न सक्षम हुनुहुने छैन। मेरो लागि त्यो त्रुटि मात्र एउटा बहाना हो किनभने यो बिना तपाईं सहमत हुनुहुन्न।
म एप्पलबाट थाकेको छु र मलाई के मनपर्दछ हेर्नुहोस्।
"फिंगरप्रिन्ट सेन्सर जुन उनीहरूले आईफोन s एसको साथ प्रस्तुत गरेका थिए, र यसैले अन्य सबै, केवल एक्स प्रोसेसरसँग मिलेर काम गर्ने छ जुनसँग यो माउन्ट गरिएको थियो"।
कोकाकोलोलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई थाहा छ। के म भन्न खोज्दै छु कि उनीहरूले त्यो त्रुटिलाई "धिक्कार्न" फ्याँकिदिए किनकि यो सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ कि यो बिना, एक पटक बटन परिवर्तन भए पछि तपाईसँग टच आईडी सक्रिय छैन।
मलाई लाग्दैन कि तपाईं हार्डवेयरको बारेमा धेरै बुझ्नुहुन्छ, किनकि धेरै जसो प्रारम्भिक जेलब्रेक हार्डवेयर एक्स्पोइट्स मार्फत हासिल गरिएको हो सफ्टवेयरको रूपमा होइन, त्यसैले हार्डवेयरमा थोरै फरकले प्रमुख उपकरण सुरक्षा विफलता निम्त्याउन सक्छ।
Chin0crix लाई जवाफ दिनुहोस्
यो यसको टेक्निकल समर्थन सेवामा एप्पल एकाधिकारको र हामीलाई केवल १ वर्षको वारंटी र घर भाडामा लिन कोशिस गर्दै छ।
यो यस्तो देखिन्छ कि म एक रेनोल्ट खरीद गर्दछु र मैले यसलाई नरकको लागि आधिकारिक कार्यशालामा लग्नु पर्छ, यो गुनासो हो वा हो! जो कोहीले पनि मेरो तकनीकी सेवालाई धिक्कार्न जबरजस्ती गर्न सक्दैन!
तिनीहरूले पहिले नै चूस!
समाधान मर्मत को मूल्य कम छ। जब अनौपचारिक साइटहरूमा तिनीहरूले तपाईंलाई 50० र e० यूरो बीचको परिवर्तनको लागि शुल्क लिन्छन्, यी व्यक्तिहरू आएर तपाईंसँग १ you० शुल्क लिन सक्दैनन्। म स्वीकार गर्दछु कि यो महँगो पर्दछ, तर म त्यो जम्प 80० देखि १€० accept मा स्वीकार्दिन।
R54 लाई जवाफ दिनुहोस्
पाब्लो कृपया अंग्रेजी शब्द "रिबर्फिश" लाई सुधार गर्नुहोस् किनकि यो "नविकरण गरिएको छ"। राम्रो लेख, जानकारी को लागी धन्यवाद।
Pollet लाई जवाफ दिनुहोस्
भयो। चेतावनी को लागी धन्यवाद!
तपाईं कसरी «त्रुटि 53 XNUMX» जेलको ब्रेकमा सुरक्षा, एप्पल पे ... आदि को बहानाको साथ देखा पर्नेछ देख्नुहुनेछ।
Dir लाई जवाफ दिनुहोस्
यदि तपाईं सँधै आधिकारिक घरमा ग्यारेन्टी चाहानुहुन्छ भने कारहरूको साथ उस्तै हुन्छ, मेरो केस सिटमा, प्रत्येक मर्मतका लागि आधिकारिक घरमा २ वर्षको ग्यारेन्टी छ र यसमा केही महिना मात्र बाँकी छ, यदि, सुरक्षा तिरेको भए, यदि तपाईं यसलाई अधिक सस्तो चाहनुहुन्छ किनकि एक अनौपचारिकको लागि, कोहीले केहि पनि बाध्य पार्दैन
Hanni3al1986 लाई जवाफ दिनुहोस्
जोन स्मिथ भन्यो
यो उपकरणलाई आधिकारिक वा आधिकारिक पुन: आगमन केन्द्रमा लैजान सत्य छ, केहि वर्ष अघि मेरो आइपड नानोको क्लिक ह्विल बिग्रिएको थियो, मसँग ती ठाउँहरू मध्ये कुनै एकलाई मर्मत गर्नको लागि यसलाई लिनको अरू विकल्प थिएन जुन उनीहरूले इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूको मर्मत गरे। मेरो भेनेजुएलाको देशमा, त्यहाँ कुनै आधिकारिक वा आधिकारिक एप्पल सेवा केन्द्रहरू छैनन्), र उनीहरूले के गरे मेरा आईपडलाई अधिक पेस गरे, तिनीहरूले लकिंग बटनलाई क्षति पुर्‍यायो, किनारहरू कुनै कुनै जबरजस्ती उपकरण, आदि द्वारा बिग्रिए। मलाई आशा छ कि केहि बर्षमा स्याउ ल्याटिन अमेरिकाभर विस्तार गर्न चाहान्छ, यदि यो केवल प्रत्येक देशको राजधानीमा नै छ भने पनि।
जोन स्मिथलाई जवाफ दिनुहोस्
यो अनुमान गर्न सकिन्छ कि यसलाई अनधिकृत केन्द्रमा लगेर अन्ततः गल्ती हुनेछ, तर सिट केसमा फर्कदा, यो यस्तो छ मानौं मैले यसलाई मेरो छिमेकको ग्यारेजमा लगें र मर्मत गरिसकेपछि कार सुरु हुँदैन, यो इलेक्ट्रोनिक हो लक भयो र केवल चीज प्रयोग गरीन्छ जुन स्क्र्याप मेटलका लागि हो किनभने त्यो कार्यशाला आधिकारिक कार्यशाला होइन
यो टच आईडी निस्क्रिय गर्नका लागि पर्याप्त छैन, फोन ईन्ट सेन्टो माफ गर्नु राम्रो हुन्छ, तर "यो तपाईको सुरक्षाको लागि हो" मलाई विश्वास गर्दैन।
Drizzt लाई जवाफ दिनुहोस्
ठ्याक्कै। यो म माथि टिप्पणी भन्न को लागी हो। त्यो टच आईडीले काम गर्न छाड्छ तर उनीहरूले फोन प्रयोग गर्न जारी राख्छन्। जबसम्म त्रुटि देखा पर्दैन, तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंसँग टच आईडी छैन र सुरक्षा अझै पनि प्रभावकारी थियो, त्यसैले अब जब उनीहरूले तपाईंको फोनलाई पूर्णरूपमा बेकार छोडे उनीहरूले यो किन गर्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ।
मैले कस्तो क्रूरतापूर्वक पढ्नुपर्‍यो ... तर अहो यो देखिन्छ कि एप्पलले के गर्छ उसले त्यहाँ जहिले पनि यसलाई बचाउनेछ।
वास्तवमा, त्रुटि the 53 टच आईडीमा रहन्छ र धेरै केसहरूमा यसलाई पुरानो बदल्दा समाधान हुन्छ यदि स्क्रिन परिवर्तन नगरीकन परिवर्तन गरिएको छ, तर यदि टच आईडी विच्छेद हुन्छ भने के हुन्छ? यदि यो चुप लागी यसलाई राख्नै पर्छ किनभने यसलाई समाधान गर्ने कुनै उपाय छैन (तपाई घर बटन परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ, तर स्पर्शले राम्रो गर्दैन) राम्रो कागजीवेट राख्नुहोला किनकि पूर्व सूचना बिना कागजवेट राख्नुहोला किनकि मेरो केसमा त्यो भयो। मैले मेरो फोन अपडेट गर्नका लागि जानकारी हराएको छु जुन एक गैर-मौलिक टच आईडी थियो किनकि नजिकको एप्पल स्टोर मेरो शहरबाट लगभग २०० किलोमिटर टाढा छ र यदि मैले त्यसलाई पठाउने निर्णय गरेको छु भने, म फोन बिना एक हप्ता भन्दा बढी पाउन सक्दछु। मेरो मोबाइल भनेको मेरो कामको उपकरण हो ... र एप्पलले मलाई बिना चेतावनी बिना नै चुप्यो ... म बजारमा सबै आईफोनहरू मार्फत गएँ र आज दिन सकियो। माफ गर्नुहोस् एप्पल तर यो बाटो वा तरीका होइन।
कठोर वास्तविकता: एप्पलको एकाधिकार अभ्यासहरू। तिनीहरू केवल चाहन्छन कि तपाईंले उनीहरूको वालेटलाई बढी मोटाउन धेरै बिलहरूको नरक तिर्नुहोस्, किनकि यो अत्यधिक माग गरिएको उत्पादन हो, साधारण कारणका लागि: उनीहरूले यस अवस्थाको फाइदा लिन्छन् किनकि उनीहरूलाई के थाहा छ उनीहरूले के बेचेको थाहा छ। एकाधिकार र क्यापिटलिज्म उपभोक्ता मर्न को लागी, यो एप्पल को लागी अफसोस गर्छ कि यो यसको प्रयोगकर्ताहरु लाई गर्न ...। मेरो व्यक्तिगत राय।
एड लाई जवाफ दिनुहोस्
तर्कमा आधारित एक प्रश्न, यदि असफलता गलत वा असत्यापित अंशहरूको कारणले हो, तिनीहरूलाई मूलमा परिवर्तन गर्दा समस्या समाधान हुँदैन?
मसँग अहिले error6त्रुटिको साथ आईफोन and र s छ र मैले हजारौं तरिकाहरू पहिले नै प्रयास गरिसकें र मैले केहि हासिल गरेको छैन, मेरो अर्को चरण हार्डवेयरको टुक्राहरू बदल्ने र यसले के लिन्छ भनेर हेर्नुहोस्।
फली रुइज भन्यो
त्रुटि 53 error को बारेमा सबैभन्दा निराशजनक कुरा यो हो कि म मार्बेलाको एप्पल स्टोरबाट आएको हुँ र तिनीहरूले मलाई भने कि फोन अर्को अनधिकृत साइटमा मर्मत गरिएको थियो किनकी तिनीहरू अब यसलाई ठीक गर्दैनन्, त्यसैले म वारेन्टी गुमाउन सहमत छु (मसँग एक थियो वर्ष बाँकी), तर सबै भन्दा माथि तिनीहरूले मलाई भन्दछन् कि उनीहरू न त यसको मर्मत गर्न सक्छन् न मलाई नवीकरण योजना दिन सक्छन्।
म विश्वास गर्छु कि यो रिपोर्ट गरिएको छ।
फली रुइजलाई जवाफ दिनुहोस्
लुइस डी भन्यो
ठीक छ, मैले वेबमा पढेका पछाडि, म यस त्रुटिलाई छोड्ने दुई सम्भावित तरिकाहरू छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्छु:
१.- टच र स्क्रिन बिना आईफोन पुनर्स्थापना, र एक पटक आईट्यून्स प्रक्रिया समाप्त हुन्छ। ब्याट्री अनप्लग गर्नुहोस्, त्यसपछि सबै कुरा पुन: जडान गर्नुहोस् र यस्तो लाग्दछ कि यो तयार छ ... अवश्य हो, टर्मिनलको अन्य अद्यावधिक वा पुनर्स्थापना सम्म।
२.- मूल टच आईडी राख्नुहोस्, यसको साथ बहाल।
लुइस डी लाई जवाफ दिनुहोस्।
निश्चित रूपमा केहि आउने हप्ताहरूमा सुरूवात हुनेछ, ध्यानमा राख्नुहोस् कि त्रुटि just 53 भर्खर एप्पल द्वारा प्रस्तुत गरिएको थियो र स्टोरहरूमा तीनीहरूको प्यान्टमा समात्नुपर्नेछ, गुम्बजबाट उनीहरूले समाधान प्रस्ताव गर्नेछन् र यसलाई यसलाई तैनाथ गर्ने छन्। स्टोरहरू निश्चितको लागि, हो, पोर्टफोलियो तयार गर्नुहोस् ...
एप्पलले एप्पल स्टोरमा भर्चुअल रियलिटी चश्मा बिक्रीमा राख्दछ
एप्पल आईफोन se सेसीको रंग गमटसँग सहि छ